Navoaka ny kinova vaovao an'ny Lakka 2.3.2, safidy tsara ho an'ny kilalao taloha an-tsekoly | Avy amin'ny Linux
Namoaka ny kinova Lakka 2.3.2 vaovao, safidy tsara ho an'ny kilalao taloha
Lakka dia fizarana Linux izay mifototra amin'ny emulator lalao console RetroArch, izay manome fakan-tahaka ny fitaovana marobe sy manohana ireo endri-javatra mandroso toy ny lalao marobe, fitehirizam-bolam-panjakana, fanatsarana ny kalitaon'ny lalao taloha amin'ny alokaloka, famerenana lalao, fametahana mafana ireo lalao ho an'ny lalao ary horonantsary mivantana.
Raha vantany vao apetrakao ny zava-drehetra, dia hanana console amin'ny lalao rehetra alain-tahaka ianaomanomboka amin'ny lalao Atari ka hatramin'ny lalao Playstation. Ity rafitra ity manana katalaogin'ny emulator hahafahantsika mankafy anaram-boninahitra avy amin'ny console Retro isan-karazany, toa ny SEGA, Nintendo, ary koa ny NES, SNES ary Gameboy, ary na dia ny kilasika ho an'ny DOS na lalao maoderina somary hafa toa ny an'ny PlayStation na PSP.
Lakka dia manana kinova izay namboarina ho an'ny sehatra i386, x86_64 (Intel, NVIDIA na AMD GPU), Raspberry Pi 1/2/3, Orange Pi, Cubieboard2, Cubieboard2, Cubietruck, Banana Pi, Hummingboard, Cubox-i, Odroid C1 / C1 + / XU3 / XU4, sns.
1 Momba ny kinova vaovao an'ny Lakka 2.3.2
2 Ampidino ny Lakka 2.3.2
Momba ny kinova vaovao an'ny Lakka 2.3.2
Andro vitsy lasa izay Navoaka ny kinova 2.3.2 vaovao, ity no andiany voalohany amin'ny taona ary miaraka amina vaovao somary mahaliana, izay ny fanavaozana ny RetroArch fototra ho an'ny kinova 1.8.4 dia nasongadina.
Miaraka amin'ny fampidirana an'ity kinova RetroArch 1.8.4 vaovao ity nohatsaraina ny fampandrenesana an-tserasera sy ny fandikana lalao amin'ny fotoana tena izy.
Ary koa, Lakka misy scanner votoatin'ny tanana tsy misy fepetra takiana amin'ny database playlist.
Ity fomba fizahana vaovao ity dia mandray ny rakitra rehetra miafara amin'ny fanitarana fantatra ao anaty fampirimana iray ary manampy azy ireo amin'ny lisitry ny lisitra an'io rafitra io.
Amin'ny lafiny iray, nohatsaraina ny traikefa amin'ny lalao PS1 (PlayStation1) izay mila kapila mihoatra ny iray. Izany hoe ireo izay mangataka hametraka kapila faharoa satria midadasika be ny lalao. Safidy vaovao no nampiana hanohizana ny atiny aorian'ny fanovana kapila ao amin'ny Settings> User Interface.
ihany koa nesorina daholo ny fampandrenesana spam, izay vao aseho ireo fampandrenesana raha sendra bibikely, na rehefa tsy manome valiny maso ampy ny menio (mariho fa ny fampiasana hotkeys handefasana kapila dia mbola mamokatra fampandrenesana amin'ny fomba taloha, satria io no atao raha ny atiny ihany dia mihazakazaka, izany hoe tsy misy menio).
Ny faharetan'ny fampandrenesana fampahalalana mifandraika amin'ny kapila koa nidina ho amin'ny ambaratongam-pahendrena kokoa izany.
Pna ny ampahany amin'ny vatan'i Lakka izay hitantsika amin'ny atiny vaovao vitaquake2 sy vitaquake3 izay tsy misy afa-tsy amin'ny sehatra iraisana amin'izao fotoana izao. Ireo dia famerenana amin'ny laoniny ny milina Quake II sy III, avy eo.
Niorina iray hafa ny an'ny NeoCD kinova nohavaozina kokoa amin'ny emulator NeoCD Neo Geo CD, marina kokoa izy io ary miasa tsara kokoa noho ny emulator nijoro irery teo aloha, na dia amin'ny fitaovana ambany ambany toy ny Raspberry Pi aza.
Dosbox dia soloina dosbox-svn, satria nampiana ny kernel dosbox-svn teo aloha, fa satria efa voaporofo fa tsara kokoa, dia soloina ity iray ity.
Ampidino ny Lakka 2.3.2
Ho an'ireo maniry hahazo an'ity rafitra ity Azon'izy ireo atao izany amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny tranonkala ofisialin'ny tetikasa.
Ao amin'ny fizarana fampidinana azy dia afaka mahazo ny sary arak'izay tianao hitetezana ny rafitra ianao, satria voalaza etsy ambony i Lakka manana sary ho an'ny fitaovana samihafa.
Ho an'ireo mpampiasa Raspberry Pi, rehefa azonao ny sary dia azonao apetraka amin'ny SD-nao ity sary ity miaraka amin'ny fanampian'i Etcher.
Na raha mpampiasa PINN na NOOBS izy ireo dia afaka mikaroka ny rafitra ao anaty katalaogna, na dia mbola tsy miseho aza ny kinova vaovao amin'ity rafitra ity, afaka andro vitsivitsy dia tsy maintsy mampahafantatra azy ireo ny fanavaozana ny rafitra mba hahafahany azo alaina sy apetraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Namoaka ny kinova Lakka 2.3.2 vaovao, safidy tsara ho an'ny kilalao taloha
XFCE: Inona izany ary ahoana ny fametrahana azy amin'ny DEBIAN 10 sy MX-Linux 19?